iimeko emihlanu ukutshayela iindawo
Inxalenye bexhentsa ibhekisa indlela ngokwakhiwa isicelo kunamandla isitya, isiqwenga, nogwali, inkangeleko, nezinto ezinjengezo yi ucofe kunye sokubumba ukuba ukugqabhuza plastically okanye zibakhethe inxalenye istampu, ngaloo ndlela ngokufumana workpiece ye oluthandwa ziphembelele kunye nobukhulu.
Kodwa izimo ezintlanu zilandelayo:
1, processing of iindawo bexhentsa isinyithi kufuneka yinzuzo ukusebenza kwezixhobo ezikhoyo, izixhobo nkqubo kunye nenkqubo kangangoko kunokwenzeka.
2, intsimbi bexhentsa iindawo yokwenza kwimeko ukuqinisekisa ukusetyenziswa eqhelekileyo, zama ukwenza kwinqanaba ukuchaneka inqanaba uburhabaxa umphezulu iimfuno mbini esezantsi, kwaye elungele ncoko imveliso, ukunciphisa inkunkuma, nokuqinisekisa umgangatho imveliso kunye nozinzo.
3, intsimbi bexhentsa iindawo yokwenza kufuneka elula kwimilo nengqiqo xa isakhiwo, ukuze lula ubume nokuvunda kwaye lula inani iinkqubo, oko kukuthi, ukugqiba ukuhluzwa ifakwe amalungu kunye mncinane kwaye zilula inkqubo bexhentsa, ukunciphisa processing ezinye iindlela, kwaye kuluncedo Umqondiso wokunyathela nokusebenza lula lombutho oomatshini kunye nemveliso automated ukwandisa imveliso yabasebenzi.
4, metal bexhentsa iindawo yokwenza kufuneka ihlangane ukusetyenziswa kwemveliso kunye nokusebenza yobugcisa, kwaye lula ndawonye kwaye wazilungisa.
5, processing of iindawo bexhentsa isinyithi kufuneka elungele ukuphucula ukusetyenziswa kwezixhobo zesinyithi, ukunciphisa ezahlukeneyo kunye nokubalulwa izinto, kunye nokunciphisa ukusetyenziswa izinto kangangoko kunokwenzeka. Sebenzisa izinto zexabiso eliphantsi naphi na apho kunokwenzeka, kwaye wenze iinxalenye abakhululekileyo kangangoko kunokwenzeka kunye nenkunkuma ngaphantsi.
ixesha Post: Jan-04-2019